Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Biodegradable
Square Wooden Hadiyad Sushi Moon Cake Box
Tani waa hadiyado muusiko ah oo loo yaqaan 'Sushi Moon Cake Box' waa naqshadeynta cusub ee sanadka 2021. Waxaa loo isticmaali karaa bisha Cake, Sushi, Cake ama alaabada kale ee hadiyadaha ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin hoosta alwaaxa, daboolka warqada iyo daaqada PET oo hufan. Waxaan sidoo kale u badali karnaa daaqada PET daaqada PLA., Taas oo ka dhigaysa wax walbo oo la noolaan karo.Hadda aduunka oo dhan ayaa xadidi doona isticmaalka waxyaabaha caaga ah, sidaa darteed in la doorto baakadka noocan oo kale ah ayaa qancin doona macaamiisha codsigooda. Waxaan sidoo kale ku daabacan karnaa sanduuqa waraaqda ee banaanka oo leh astaantaada ama naqshad kale oo aad rabto. Haddii aad jeceshahay, fadlan si xor ah noola soo xiriir.
Weelka Sanduuqa Hamburger Bacrimin Kara biodegradable
Bioplastics waa alaabada balaastigga ah ee laga soo saaro ilaha biomass ee la cusboonaysiin karo, sida dufanka khudradda iyo saliidaha, istaarijka galleyda, cawska, xaashiyaha, balka, qashinka cuntada dib loo rogay, iwm. Bayoolajiga waxaa laga samayn karaa wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale caagagga la isticmaalay (sida dhalooyinka caaga ah) iyo weel kale) adoo adeegsanaya noolaha. Bioplastics-ka waxaa badanaa laga helaa waxyaabo ka soo jeeda sonkorta, oo ay ku jiraan istaarijka, cellulose, iyo lactic acid. Bacaha caamka ah, sida balaastigga shidaalka-shidaalka (oo sidoo kale loo yaqaanno polymer-ka macdanta leh) ayaa laga soo qaatay batroolka ama gaaska dabiiciga ah.
Laba Weel Weelka Cunnooyinka Cunnada Weelka
Balaastigga galleyda waxaa laga sameeyaa astaamaha loo yaqaan 'polylactic acid' (PLA), oo ah beddel caag ah, oo laga sameeyay istaarijka dhirta qallalan. Waxay noqoneysaa beddel caan ah oo caag dhaqameed ah, kaas oo ka soo jeeda kiimikooyinka ku saleysan batroolka. Beeraha Kor Isticmaalka kala duwan ee polylactic acid waxay noqon kartaa hab loo maro yareynta raadadka kaarboonka ay ku hartay balaastigga shidaalka.
Cunnooyinka Cunnida Masarka ladaadin karo ee ladaadin karo
Baakadaha polystyrene awood uma leh in dib loo warshadeeyo waana in lagu tuuraa qashin qub. Sidaa darteed ， waxaan raadineynaa in aan u isticmaalno alaabada baakadaha dib loo isticmaali karo iyo kuwa baabi'in kara meeshii suurtagal ah Qalabka baakadaha ku dhafan ee ku saleysan istaarikada, sheygu waa mid la baabi'in karo laakiin ma ahan wax liita marka la barbardhigo qalabka polymer-ka la isku qurxiyo. iyo istaabaska tapioca.
Bacda Furan ee Fududeeyaha PBAT
Isticmaalka sii kordhaya ee Biodegradable PBAT PLA Flat Open Bag micnaheedu waa in dano badan laga qabo in la isticmaalo kheyraadka bio-ku saleysan (dib loo cusbooneysiin karo) si loo soo saaro alaabtaan, si kastaba ha noqotee, hadda ma jiraan sharciyo u baahan soo saarayaasha caagagga inay ku dhawaaqaan joogitaanka ilaha la cusboonaysiin karo alaabta Si kastaba ha noqotee, waxaa jira habka tijaabada Yurub, oo qeexaya habka xisaabinta ee lagu ogaanayo waxyaabaha kaarboon ku saleysan noolaha ee monomers, polymer iyo qalabka caagga ah iyo alaabooyinka, oo ku saleysan cabirka waxyaabaha 14C.
Bacda Dukaameysiga Bakhaarka PBAT PLA oo wax u nuglaada
Qashinka caaga ah ayaa laga soo saaraa adduunka oo dhan; Qashinka caagga ah ayaa ka kooban inta badan qashinka badda. Iyada oo taas laga jawaabayo ayaa warshadaha caaggu waxay suuqa u soo bandhigayaan noocyo cusub oo polymer-nooleyaal la baabi'in karo kuwaas oo ay dad badani u arkaan inay siinayaan waxyaabo badan oo 'deegaan ahaan u habboon' beddelaadyada polymer-ka dhaqameed; si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaabab jahwareer ah oo ku saabsan eray bixinno iyo waxyaabo la xiriira polymer. Waxaanan bixin karnaa bacda wax iibsiga PBAT PLA Cornstarch Bag si loo xaliyo dhibaatada qashinka.